Man United oo qorsheyneysa inay lasoo saxiixato daafac muhiim ka ah horyaalka La Liga – Gool FM
Dajiye February 25, 2021
(Manchester) 25 Feb 2021. Wargeyska “Daily Mail” ee dalka England ayaa soo wariyay in kooxda reer England ee Manchester United, ay qorsheyneyso inay la saxiixato daafaca reer France iyo naadiga Seville ee Jules Koundé, inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaaga ee soo socda.
Jules Koundé oo 22 jir ah ayaa ku biiray kooxda Seville xagaagii 2019, isagoo kaga yimid naadiga Bordeaux ee dalka France, wadar ahaan qiimo dhan 25 milyan euro.
Haddana da’ayarkan reer France ayaa wuxuu noqday mid ka mid ah ciyaartoyda ugu muhiimsan kooxda Seville iyo horyaalka La Liga, tan iyo markii uu yimid dalka Spain.
Wargeyska “Daily Mail” in si hoose ay ula socdaan wada hadalada u dhexeeya kooxda Seville iyo xiddigooda Jules Koundé, kaasoo ku saabsan suurtoganlimada uu ku saxiixi karo qandaraas cusub.
Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in kooxda reer England ay ka labalabeynayso arinta ku saabsan bixinta qiimaha lagu kansali karo Jules Koundé, kaasoo gaaraya ilaa iyo 68 million pounds, sidaas darteed United-ka waxay doorbideysaa inay la xaajooto Seville si xoogaa looga yareeyo qiimaha.
Wargeyska ayaa wuxuu intaas ku daray in Manchester City ay sidoo kale xiiseeneyso adeega laacibkan, isla markaana ay dooneyso inay la saxiixato, laakiin Red Devils ayaa loo arkaa inay tahay tan ugu macquulsan ee ku guuleysan karta adeegga ciyaaryahanka reer France.
Waxaa xusid mudan in qandaraaska Jules Koundé uu kula joogo kooxdiisa haatan ee Seville, uu dhici doono xagaaga 2024.